သင်မသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ – H2H
$74000 လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကို ကျင်းပပေးမယ့် Jang Geun Suk ရဲ့ပရိတ်သတ်များ
သင်မသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာများ
ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံး ငါး (၁၀) မျိုး
ခါးကဆီတွေကို ၇ ရက်အတွင်း ၈ စင်တီမီလောက် လျှော့ချပေးမဲ့ သဘာဝလက်ဖက်ရည်
ဘယ်တော့မှ မနစ်မြုပ်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော (သို့ မဟုတ်) မြန်မာ့ ရှေ့တန်း...
လူတွေဟာ အများအားဖြင့် လူပုံအလယ်မှာစကားပြောရတာကို သေမှာထက်ပိုကြောက်ကြသလား?
သင့်ရဲ့ BFF လေးကသင့်ကို Crush နေကြောင်းသိနိုင်မယ့် အချက် (၉) ချက်
ဘယ်အရာက အချစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံလေးတွေ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့မှ အနက်အလုပ်သွားချိန် မြင်ကွင်းများ
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ရုပ်ထုကို ကိုးကွယ်ခြင်း မဟုတ်ပါ
အ၀တ်အစားရွေးချယ်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မိတဲ့ အမှားလေးတွေ
နှာခေါင်းကြီး လို့စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆာဂျရီ သွားလုပ်စရာမလိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်း
နောက်​ ၁၀ နှစ်​အတွင်း မြန်​မာ တနိုင်​ငံလုံးက သူ့ကိုပဲ ကိုးကွယ်​ကြလိမ့်​မည်​ဟု ထုတ်ဖော်ဝင့်ကြွားလိုက်တဲ့...
The Great Ocean Migration လို့ အမည်ရတဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာ ငလိပ်ကျောက်အုပ်ကြီး သွားလာနေတာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီပုံလေးဟာ ကမ္ဘာကျော်ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ Trolltunga လို့ ခေါ်တဲ့ Norway မှ နာမည်ကျော် ကျောက်ဆောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အရမ်းကြီး မမြင့်ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖိုဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုးတိမ်တွေထဲကိုရောက်နေတဲ့ ကျောက်တောင်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဗင်နီဇွဲလား၊ ဘရာဇီးလ်နဲ့ ဂူယာနာတို့ကြားက လူသူအရောက်အပေါက်နည်းလှတဲ့ Mount Roraima ဆိုတဲ့ တောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြူခိုးတွေဆိုင်းနေတဲ့အချိန်ကို ရိုက်ယူထားတဲ့ပုံပါ။
ရေခဲပြင်များဖုံးလွမ်းထားတဲ့ Greenland ဒေသကပါ။ The amazing Elephant Foot Glacier လို့ နာမည်ကျော်တဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဖူဂျီတောင်ရဲ့ အပေါ်မှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ အံ့ဖွယ်တိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုပါ။ Lenticular clouds over Mount Fuji.
ဒီပုံကိုလည်း ယုံကြမှာမဟုတ်လောက်ဘူးနော်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကဲရာလာဒေသမှ လိမ်ကောက်ကွေးနေတဲ့ အံ့ဖွယ်အုန်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ A gorgeous spiraled coconut tree in Kerala, India.
အီရန်နိုင်ငံ၊ ဟာဆန်လူဒေသမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ဂုတ်ဂူထဲက စုံတွဲတစ်ခုရဲ့ အနမ်းပုံနဲ့ အရိုးစုများ ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့ဖွယ်တစ်ခုပါပဲ။ The 6000 year old kiss found in Hasanlu, Iran.
ပင်လယ်ထဲက အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ကြောက်စရာသတ္တ၀ါကြီးလို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Blue Whale လို့ခေါ်တဲ့ ဝေလငါးကြီးတစ်ကောင်က လှေငယ်လေးအောက်ကနေ ကူးခတ်သွားတာကို ဝေဟင်ပေါ်ကနေ ဓါတ်ပုံပညာကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ယူထားတာပါ။ အခြားရှုတောင့်ကနေ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၊ ပါတာဂိုနီးယားရေကန်ထဲကို မိုးကြိုးပစ်ချတဲ့ လျှပ်တပြတ်မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ Lightning over Patagonia, Argentina
ဒီပုံကို ဘယ်လိုခေါ်မလဲ? အိမ်လား၊ ရွာလား၊ တောင်လား၊ ဘာကြီးလဲ? အီရန်နိုင်ငံ၊ တောင်ကုန်းတစ်ခုကို ဖောက်ထွင်းပြီး လူနေအိမ်များ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရှေးလက်ရာ ရွာဟောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခုထိ ရှိနေပါသေးတယ်။အခုတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သွားပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီသည်များလည်း အရောက်သွားနိုင်ကြပါပြီ။ အိမ်တွေကလည်း တိုက်ခန်းတွေဖြစ် ဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလာပါပြီ။ Mountain Village in Iran : Masuleh architecture is awesome. The houses have been built into the mountain and are interconnected
The Great Ocean Migration လို့ အမညျရတဲ့ ပငျလယျထဲမှာ ငလိပျကြောကျအုပျကွီး သှားလာနတောကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီပုံလေးဟာ ကမ်ဘာကြျောပုံတဈပုံ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒါကတော့ Trolltunga လို့ ချေါတဲ့ Norway မှ နာမညျကြျော ကြောကျဆောငျကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ။ တကယျတော့ အရမျးကွီး မမွငျ့ပါဘူး။ ဓါတျပုံပညာနဲ့ သဲထိတျရငျဖိုဖွဈအောငျ ရိုကျကူးပွီး ပွိုငျပှဲဝငျကွတဲ့ ပုံတှေ ဖွဈပါတယျ။
မိုးတိမျတှထေဲကိုရောကျနတေဲ့ ကြောကျတောငျကွီး မဟုတျပါဘူး။ ဗငျနီဇှဲလား၊ ဘရာဇီးလျနဲ့ ဂူယာနာတို့ကွားက လူသူအရောကျအပေါကျနညျးလှတဲ့ Mount Roraima ဆိုတဲ့ တောငျကွီးပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွူခိုးတှဆေိုငျးနတေဲ့အခြိနျကို ရိုကျယူထားတဲ့ပုံပါ
ရခေဲပွငျမြားဖုံးလှမျးထားတဲ့ Greenland ဒသေကပါ။ The amazing Elephant Foot Glacier လို့ နာမညျကြျောတဲ့ ပုံတဈပုံဖွဈပါတယျ။
ဖူဂြီတောငျရဲ့ အပျေါမှာ ဖွဈတညျနတေဲ့ အံ့ဖှယျတိမျတိုကျကွီးတဈခုပါ။ Lenticular clouds over Mount Fuji.
ဒီပုံကိုလညျး ယုံကွမှာမဟုတျလောကျဘူးနျော။ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ ကဲရာလာဒသေမှ လိမျကောကျကှေးနတေဲ့ အံ့ဖှယျအုနျးပငျဖွဈပါတယျ။ A gorgeous spiraled coconut tree in Kerala, India.
အီရနျနိုငျငံ၊ ဟာဆနျလူဒသေမှာ ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၆၀၀၀ ကြျောရှိတဲ့ ဂုတျဂူထဲက စုံတှဲတဈခုရဲ့ အနမျးပုံနဲ့ အရိုးစုမြား ဖွဈပါတယျ။ အံ့ဖှယျတဈခုပါပဲ။ The 6000 year old kiss found in Hasanlu, Iran.
ပငျလယျထဲက အငျမတနျကွီးမားတဲ့ ကွောကျစရာသတ်တဝါကွီးလို့ ထငျသှားနိုငျပါတယျ။ တကယျတော့ Blue Whale လို့ချေါတဲ့ ဝလေငါးကွီးတဈကောငျက လှငေယျလေးအောကျကနေ ကူးခတျသှားတာကို ဝဟေငျပျေါကနေ ဓါတျပုံပညာကောငျးကောငျးနဲ့ ရိုကျယူထားတာပါ။ အခွားရှုတောငျ့ကနေ ရိုကျထားတဲ့ပုံတှေ အမြားကွီး ရှိပါသေးတယျ။
အာဂငျြတီးနားနိုငျငံ၊ ပါတာဂိုနီးယားရကေနျထဲကို မိုးကွိုးပဈခတြဲ့ လြှပျတပွတျမွငျကှငျးဓါတျပုံ ဖွဈပါတယျ။ Lightning over Patagonia, Argentina
ဒီပုံကို ဘယျလိုချေါမလဲ? အိမျလား၊ ရှာလား၊ တောငျလား၊ ဘာကွီးလဲ? အီရနျနိုငျငံ၊ တောငျကုနျးတဈခုကို ဖောကျထှငျးပွီး လူနအေိမျမြား တညျဆောကျထားတဲ့ ရှေးလကျရာ ရှာဟောငျးတဈခု ဖွဈပါတယျ။ အခုထိ ရှိနပေါသေးတယျ။အခုတော့ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ကောငျးမှနျသှားပွီး ကမ်ဘာလှညျ့ခရီသညျမြားလညျး အရောကျသှားနိုငျကွပါပွီ။ အိမျတှကေလညျး တိုကျခနျးတှဖွေဈ ဖွေးဖွေးပွောငျးလဲလာပါပွီ။ Mountain Village in Iran : Masuleh architecture is awesome. The houses have been built into the mountain and are interconnected
Posted by datha
By kaung kaung
By Arr luu
ဘယ်တော့မှ မနစ်မြုပ်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော (သို့ မဟုတ်) မြန်မာ့ ရှေ့တန်း ခံစစ်ကြောင်း